Kulankii u dhaxeeyay wasiir Sabriye iyo Galmudug qeebta dhuusa mareeb oo la isku mari la,yahay | XAL DOON
Home ARTICLES Kulankii u dhaxeeyay wasiir Sabriye iyo Galmudug qeebta dhuusa mareeb oo la...
Kulankii u dhaxeeyay wasiir Sabriye iyo Galmudug qeebta dhuusa mareeb oo la isku mari la,yahay
Sida ay sheegayaan wararak aan ka Heleeno magaalada dhuusa mareeb ee caasimada Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in kulamadii uu wasiirka arimaha gudaha la qaatay madaxda ugu sareesa maamulka Galmudug la isku mari waayay arimihii laga wada hadlay.
Waxyaabaha la isku mari waayay oo uu wasiirka la tagay dhuusa mareeb ayaa waxaa kamid aheed in doorasho madaxwayne iyo mid barlamaan laqabto bisha july ee sanadkaan dhexdiisa taas oo ay si ween uga soo horjeesteen Madaxwayne Iyo xaaf iyo raisal wasaarihisa shiikh shaakir , kulankaas ayaa waxa usoo dhamaaday iyadoo aysan jirin wax la isku afgartay haba yaraate.
Sidoo kale isla maanta ayuu kulan la qaatay wasiirka Macalin maxamuud oo lagu tiriyo dadka ugu awooda badan maamulkaas isla markaana ay ka go, do talada inteeda badan . kulankaas oo saacado badan qaatay ayaa sidoo kale waxaa lasoo sheegaya in wax natiijo ah aysan kasoo bixin iyadoo waxa ugu muhiimsan la isku mari la,yahay ay aheed xiliga ay ku ektahay mudadada maamulkaas iyo in laqabanaayo doorasho madaxwayne iyo mid barlamaan.
wararki ugu danbeeyay oo aan ka helnay magaalada dhuusa mareeb ayaa waxa ay tibaaxayaan in wasiirka caawa uu hoyan doono magaaladaasi asagoo kulamo dheeri ah la qaadan doona madaxda maamulkaas si uu iskugu dayo inuu ku qanciyo goaanka dowlada ee ah in doorashada Galmudug laqabto xilkiga dowlada iclaamisay oo ah July sanadkan.